Ibraahim iyo farcankiisii weligoodba (Siduu awowayaasheennii ula hadlay). (Lukoos 1: 46-55)
Ogow (kuna sugnowNabiyow) inaan Ilaah mooyeen Ilaah kale jirin, una dambi dhaaf waydii naftaada iyo mu’miniinta rag iyo haweenba. Ilaahna waa ogyahay dhaqdhaqaaqiinna iyo nagaadigiinnaaba. (Muxammad 47:19)
Adiguna waxaad tahay hore iyo intii dambeba, oo wax walba ka weyn, adigu waxaad tahay agtiisa ah.” (Muslim 35: 6563)
Ilaahoow, iigu naxariiso sida raxmaddaadu tahay, Oo xadgudubyadaydana igaga tirtir sida naxariistaada badnaanteedu tahay. Xumaantayda iga wada maydh, Oo iga nadiifi dembigayga. Waayo, anigu waan ogahay xadgudubyadayda, Oo dembigayguna hortayduu yaallaa had iyo goorba. Adiga keliya ayaan kugu dembaabay, Oo waxaan sameeyey wax hortaada ku xun, Inaad xaq ahaatid markaad hadashid, Oo aad daahir ahaatid markaad wax xukunto. Bal eeg, aniga waxaa laygu qabanqaabiyey xumaan, Oo waxaa hooyaday igu uuraysatay dembi. Bal eeg, waxaad uurka ka jeceshahay run, Oo meesha qarsoon waxaad iga ogeysiinaysaa xigmad. Haddaba geed husob ah igu daahiri, oo anna nadiif baan ahaan doonaa, i maydh, oo anna baraf cad waan ka sii caddaan doonaa. I maqashii farxad iyo rayrayn, Inay lafihii aad jejebisay farxaan. Wejigaaga ka qari dembiyadayda, Oo iga tirtir xumaatooyinkayga oo dhan. (Sabuurraddii 51:1-9)
Kuna yidhi anigu waxaan uun ahay rasuulka Eebahaa inaan ku siiyo wiil daahir ah. Waxayna tidhi side iigu ahaan wiil anoosan i taaban dad, ahaynna mid xun (la tuhmo). Wuxuuna yidhi waa sidaas, wuxuuna yidhi Eebahaa wuu u fudud yahay korkayga iyo inaan uga yeello calaamad dadka iyo naxariis xagayga ah waana arrin la xukumay (dhammeeyey). Way xambaartay (uurowday) waxayna u fogaatay mel dheer (durugsan). (Maryam 19: 19-22)
Author [email protected]Posted on 12/12/2016 16/12/2019 Categories Sii Sheegid ee SabuurTags dhalashada bikradda ahayd ee Ishacyaah, dhalashada bikradda ahayd ee Maryam, Isa al Masih iyo dhalashada bikradda ah, Isa in zabur, Nebi Ishacyaah, nebiyadii zabur, oo ahaa Ishacyaah ina?, Suurat At-Taxriim, waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Isa ?, waxaa Isa dhashay ee bikrad ah
Previous Previous post: Soo Bandhigida Sabuur
Next Next post: Imaanshaha Boqortooyada